Vaovao - Raha toa ka simba ny tontolo fonosanao na tia ny tontolo iainana
Nanjary fironana ny namana ara-tontolo iainana ankehitriny, maro kokoa ny olona miahy azy isan'andro, satria miatrika loza mitatao vokatry ny fanimban'ny tenantsika voajanahary isika. Ho anay, amin'ny maha-mpanamboatra boaty fonosana antsika, dia matetika no anontaniana ianao raha mety ho simba ny vatanao?
Voalohany, andao jerena izay atao hoe biodegradable?
Ny "biodegradable" dia manondro ny fahafahan'ny zavatra mihahaka (simba) amin'ny alàlan'ny fihetsiky ny zavamiaina bitika toy ny bakteria na holatra biolojika (misy na tsy misy oxygen) na dia tafiditra ao anatin'ny tontolo voajanahary aza. Tsy misy ratra ara-tontolo iainana mandritra io fotoana io.
Avy eo, andao jerena izay fitaovana nampiasaintsika tamin'ilay boaty? Matetika ny baoritra volondavenona, taratasy mifono, taratasy kanto, lakaoly miaraka amin'ny loko fanontana sy ny fetra.
Raha ny marina, ireo tsy afaka ny ho ampahany voajanahary dia ny lakaoly sy ny fetra.
Aleo aloha lazaina ny lakaoly. Ho an'ny ankamaroan'ny lakaoly ampiasaina eny an-tsena, dia simba nefa mila fepetra faran'izay mafy. Saingy misy ny adhesif noforonina, izany no hoavintsika tsara amin'ny indostria.
Ho famerana, azontsika atao ny misafidy ny akora tsy ampiana fetra na manampy fetra nohosorana menaka.
Noho izany, amin'ny ankapobeny, ny boaty fonosana ataontsika dia sariaka tontolo iainana.